किन हुन्छ महिलामा पिसाब चुहिने समस्या ? - Dainik Nepal
किन हुन्छ महिलामा पिसाब चुहिने समस्या ?
दैनिक नेपाल २०७४ पुष २२ गते १२:४७
– डा. अर्जुन देव भट्ट
खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा, गह्रुङ्गो बोझ उठाउँदा, यौन सम्बन्ध राख्दा वा त्यस्तै अरू कारणले पेटभित्र एक्कासी चाप बढेको स्थितिमा त्यो चाप मूत्रथैलीभित्र प्रेषित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मूत्रथैलीको घाँटी र मूत्रनलीको सुरुको भाग एक्कासी खुलेको खण्डमा पिसाब रोक्न सकिँदैन । विभिन्न कारणवश पिसाब चुहिने समस्या भएका महिलामध्ये चाप सम्बद्धको संख्या ५० प्रतिशत हुन्छ । महिलामा पिसाब नलीको बीचको भागलाई झोलुङ्गे आकारको संरचनाले आधार दिएको हुन्छ । यो संरचनाको बनावटमा मलद्वार उठाउने मांसपेशी तथा विभिन्न मांसपेशीबाट निस्केको सुत तथा पट्टीले बनेको हुन्छ । तर विभिन्न कारणवश जस्तै– प्रसव क्रिया, नसाको कमजोरी, उमेर, योनि चनाको अवयवमा आएको फरकले झोलुङ्गे आधारलाई कमजोर बनाउँछ । फलस्वरूप त्यसले दिएको टेवाले मूत्रथैलीभित्र बढेको चापलाई धान्न सक्दैन, मूत्रनली खुल्छ र पलभरमै पिसाब चुहिन्छ । पेटभित्र एक्कासी चाप बढ्दा पिसाब संयम (नचुही) रहन कम्तीमा तीन प्रक्रिया तथा प्रणाली समर्थित हुन्छन् ।
पेटबाट प्रेषण भएको चापले मूत्रनलीको लचिलो अग्रभागलाई पछाडिको दह्रो भागतिर धकेलेर थिचिदिन्छ । तर मूत्रनलीको पछाडिको भागलाई दह्रो रहन प्रशस्त मात्रामा कटीको मांसपेशी र संयोजक तन्तुको आधार हुनुपर्छ । त्यसैले महिलामा पिसाब नचुहिनु भनेको मांसपेशीको सक्रिय स्थिति, कडापन र निष्क्रिय शारीरिक समायोजन कार्यको परिणाम हो ।
पिसाब चुहिने महिलाहरूमा मूत्रनली तथा त्यसलाई आधार दिने वरिपरिका मांसपेशीको सक्रियतामा कमी देखापर्छ । त्यसको अलावा ती मांसपेशी लुलो हुँदै जान्छन् । थप मूत्रनलीभित्रका झिल्ली जसले आपसमा टाँसिएर पिसाब नचुहिनुका निम्ति ३० प्रतिशत शक्ति प्रदान गर्छन्, त्यस्तो जोल्ठिने गुणको पनि अभाव हुँदै जान्छ । महिलामा चापसम्बद्ध पिसाब चुहिने अवस्थाको मुख्य कारण कटीको समतल भागको मांसपेशी, स्नायुहरू, संयोजक तन्तुजस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्ये एक वा प्राय:जसो सबैको क्षति हुनु हो ।
पिसाब चुहिने समस्याको निर्णायक सूचना महिलाबाटै पाइन्छ । कहिलेदेखि ? के चुहिने पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ? चाप सम्बद्ध मूत्र चुवाहट कुन अवस्थामा देखापर्छ ? महिलालाई यो समस्यासँग जुध्न कति गाह्रो छ ? मूत्रथैली तथा जनेन्द्रिय अङ्ग आफ्नो ठाउँबाट कति तल झर्छन् ? के दिसा त्याग्नुमा समस्या छ ? पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन कति बाधा छ ? इत्यादि । यस्ता विभिन्न प्रश्नको उत्तर बिरामीबाट बेलिबिस्तार सहित संकलन गर्नुपर्छ ।
शल्य उपचारबाट महिलाहरूको पिसाब चुहिने समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न सन् १९०७ देखिनै हो । मूत्रनली र थैलीको घाँटी तल सरेर पिसाब चुहिने समस्या हुन्छ भन्ने त्यसबेलाको विश्वास अनुसार शल्य उपचार मूत्रथैलीको घाँटीलाई स्थिर ठाउँमा पुर्‍याएर सिलाउने कार्य गरियो । यस्तो शल्यक्रियाले निकै फाइदा महसुस गरायो । तर आशा गरेजति दीर्घकालीन लाभ हुन सकेन । त्यसैले शल्य उपचारको सुधार गर्दै लगियो । पछिल्लो समयको विश्वास अनुसार मूत्रनलीको बीचको भागलाई मांसपेशी र तन्तुको पट्टाले बनेको झोलुङ्गे आकारको संरचनाले अड्क्याएर राखेको हुन्छ । यो शारीरिक बनोटको विशेषतालाई ध्यानमा राखेर आजभोलि ‘टी.ओ.टी’ शल्य उपचार चापसम्बद्ध पिसाब चुहिने महिलामा उपयोग गरिन्छ । यो विधि अहिलेसम्मकै उत्तम विधि मानिन्छ ।
यस्तो शल्यक्रियापछि महिलाहरू दोस्रो वा तेस्रो दिन अस्पतालबाट बिदा हुन्छन् । दैनिक कार्यमा २ देखि ३ दिनपछि नै संलग्न हुन सक्छन् ।
(डा. भट्ट वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट हुन् ।)